ओमेगा स्वास्थ्य - मद्दत MEHemp
ओमेगा3र ओ को महत्वमेगा6फ्याट्टी एसिडहरू उत्पाद प्याकेजि fromदेखि लिएर डाक्टरलाई भेट्न टिभीमा विज्ञापन गर्न जताततै हेराल्ड गरिएको छ। यद्यपि मानव स्वास्थ्यमा यी बोसोको प्रभावहरू अक्सर गलत अर्थ लगाइन्छ। यो लेखले आवश्यक फ्याट्टी एसिड परिभाषित गर्दछ र छलफल गरिएको छ ओमेगा3र ओ को महत्वस्वस्थ कल्याणमा मेगा6फ्याट्टी एसिडहरू।
हामीलाई किन चाहिन्छ लाई ओमेगा and र -3 फ्याट्टी एसिडका साथ चिन्ता गर्नुहुन्छ?
ओमेगा3र ओमेगा fat फ्याटी एसिडहरू कोशिका झिल्लीको महत्वपूर्ण अंग हो र शरीरले महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्न प्रयोग गर्ने अन्य महत्त्वपूर्ण पदार्थहरू बनाउन मद्दत गर्दछ, जस्तै रक्तचाप र मानव स्वास्थ्यको लागि विभिन्न खतराहरूको प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियालाई नियमित गर्ने। वास्तबमा, iपानी सामग्री gnoring, तपाईंको मस्तिष्क को %०% ओमेगा बाट बनेको छ-3 एएनडी ओमेगा-6 (%०% प्रत्येक) Tऊ शरीर लगातार निरन्तर नविकरण छ as तपाइँको छाला कोषहरू १ completely--15० दिनको अवधिमा पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन हुन्छन्। तपाइकाे शरिर लगातार आवश्यक छs एक ताजा 'दैनिक' आपूर्ति oमेगा oआईएलहरू सबै कक्षहरू पुनर्निर्माण गर्न जुन प्रत्येक दिन प्रतिस्थापन हुन्छ। थप रूपमा, अनुसन्धानको बढ्दो शरीरले सुझाव दिन्छ कि ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडले प्राणघातक मुटु रोगबाट बचाउँछ र मधुमेह र केही प्रकारको क्यान्सर रोक्न मद्दत गर्दछ।
एक ओमेगा6फ्याटी एसिड (लिनोलिक एसिड) र एक ओमेगा fat फ्याट्टी एसिड (अल्फा- बाहेक) मानव शरीरले हाम्रो शरीरलाई प्रदान गर्ने धेरै फाइदाहरूको लागि आवश्यक सबै फ्याट्टी एसिडहरू उत्पादन गर्न सक्षम छ।लिनोलेनिक एसिड) यी दुई फ्याटी एसिडहरू हामीले खाने खानाबाट खानुपर्दछ, र त्यसैले यसलाई "अत्यावश्यक फ्याट्टी एसिड" भनेर सम्बोधन गरिएको छ (किनकि यो आवश्यक छ कि हामी यी एसिडहरूमा धनी उपभोक्ताहरू उपभोक्ता हो!)। ओमेगा3र ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडहरू हाम्रो शरीरमा सबै टिश्यूहरूको सामान्य कार्यको लागि महत्त्वपूर्ण छन्। थप रूपमा, यी फ्याट्टी एसिडहरू हाम्रो शरीरको विकास र मर्मतका साथै अन्य फ्याट्टी एसिडहरू गठन गर्न महत्त्वपूर्ण छन्।
यी आवश्यक फ्याट्टी एसिडहरूको अभावले धेरै प्रतिकूल स्वास्थ्य लक्षणहरू र विकारहरू निम्त्याउन सक्छ। यसमा कलेजो र मिर्गौला असामान्यता, प्रतिरक्षा प्रणाली को कम काम, डिप्रेशन, र छाला को ड्राईन्स समावेश छ।
लाभ Of ओमेगा3र ओमेगा Fat फ्याट्टी एसिडहरू
ओमेगा3र ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडका फाइदाहरूको बारेमा अनुसन्धानले यी पदार्थहरूले स्वस्थ कल्याणमा योगदान पुर्‍याउने तरिकाहरू पहिचान गर्न जारी राख्दछ। यी स्वास्थ्य लाभहरु:
• रगतमा ट्राइग्लिसेराइडको स्तर कम गर्न सक्छ जसले हृदय रोग र स्ट्रोकको जोखिम कम गर्दछ
• रुमेटी संधिशोथसँग जोडिएको कठोरता र जोड्ने पीडालाई रोक्न सकिन्छ
• ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडको उच्च स्तरले डिप्रेसन रोक्न र उपचार गर्न मद्दत गर्दछ
• शिशुहरूमा भिजुअल र न्यूरोलोजिकल विकासमा महत्त्वपूर्ण
• बच्चाहरू र युवा वयस्कहरूमा दमको रोकथाममा सहयोग गर्न सक्छ
• बच्चाहरूमा लक्षणहरूलाई कम गर्दछ र धातु सीपहरू सुधार गर्दछ जस्तै सोच्न, सम्झन, र सिक्ने
• डिप्रेसन लक्षण र डिमेंशियामा प्रगति कम गर्न सक्छ
• स्तन क्यान्सर जोखिम कम गर्न सक्छ
• मासिक धर्म को लक्षणहरु राहत
"आदर्श अनुपात" को मतलब के हो?
तपाईंको आहारमा ओमेगा3र ओमेगा-फ्याट्टी एसिडहरू खपत गर्न पर्याप्त छैन। किनभने यो एसिडहरू शरीरमा प्रयोगको लागि एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्। तसर्थ, यी एकमध्ये अत्यधिक सेवनले अन्य फ्याट्टी एसिडको प्रयोगमा सम्झौता गर्दछ। त्यसैले यी दुई फ्याट्टी एसिडहरूको उचित अनुपात ओमेगा6र ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडहरूको स्वास्थ्य लाभहरूलाई अधिकतम बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
ओमेगा6को ओमेगा3फ्याट्टी एसिडको आदर्श अनुपातको बारेमा सहमति छैन, तर सामान्यतया, अनुमान २: १ देखि:: १ को दायरामा पर्दछ। विशिष्ट पश्चिमी आहारमा प्रशोधित खाद्य पदार्थ र तेलको व्यापकताका साथ, यो अनुमान गरिएको छ कि औसत अमेरिकीले यी आवश्यक बोसो एसिडहरू १०: १ र २:: १ बीचको अनुपातमा खान्छन्। यसले ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडहरूबाट स्वास्थ्य लाभहरूको प्राप्तिलाई रोक्छ।
भांग एक हो Of अत्यावश्यक फ्याट्टी एसिडका सर्वश्रेष्ठ स्रोतहरू
हेम्प तेल र हेम्प बीउहरू ओमेगा--देखि ओमेगा--अनुपात करिब 6: १ हुन्छन्। तुलनाको लागि, फ्याक्ससेड तेल (अलसी तेल पनि भनिन्छ) यसको स्वास्थ्य लाभहरूको लागि परिचित छ, तर केवल ०.२: १ को अनुपात मात्र छ। वास्तवमा, हेम्प र अखरोटहरू मात्र ज्ञात खाद्य स्रोतहरू हुन् जसले सिफारिस गरिएको दायरा भित्र ओमेगा recommended र ओमेगा। प्रदान गर्दछ।
गाईको तेल helpmehemp.org बाट आवश्यक फ्याट्टी एसिडहरूको एक उत्कृष्ट स्रोत हो, र यहाँ खरीद गर्न सकिन्छ।
मैग्नीशियमका फाइदाहरूमा पनि
मासिक धर्म पेटका लागि भँप तेल को अविश्वसनीय लाभ